काठमाडौंको तिर्खा र भृकुटीमण्डपको ‘ढुंगेधारा’ – देशदृष्टि
Posted bymilanbagale April 15, 2021 Posted inUncategorized
तस्वीर साभार— नेपाल लाईभ डटकम
काठमाडौं आएपछि पहिलोपटक देखेको धोबीचौरको त्यो ढुंगेधाराको वास्तुकला देखेर मन लोभिन्थ्यो। लोभलाग्दो धारा, मिठो पानी। पानीको यो प्रणाली हेर्दाहेर्दै बिलाउँदै गयो। जति ढुंगेधारा हराउँदै गयो, मेलम्चीको मोह बढ्दै गयो। काठमाडौंका ढुंगेधारा र इनार सुक्दै जाने क्रम जति तीव्र गतिमा बढ्दै गयो, मेलम्ची बन्ने क्रम उति सुस्त हुँदै थियो। यो हाहाकारले जन्मायो ट्याकरको पानीको डरलाग्दो ब्यापार। अनि उस्तै फस्टायो पानीको जारको ब्यापार। ट्याकरको पानी किन्न १० दिनसम्म पर्खनु परेको नमिठो अनुभव छ मसँग। बत्ती दिनमा १८ घण्टासम्म नआउने। पानी मगाएको १० दिनसम्म नआउने। जारको पानी किनिसाध्य नहुने। नकिनी उपाय नचल्ने । कताकती बचेका ढुंगेधारामा पानी थाप्नेको लाइन कति हो कति लामो। काठमाडौंको यो कहर सम्झिसाध्य छैन।
काठमाडौंका हरेकजसो घरमा इनार छन्। हरेक घरको इनारभित्र नियमित मोटर चल्छ। धन्न धानेको छ दह भएको उपत्यकाले। प्रत्येक ३—४ आनाको टुक्रोबाट मोटर लगाउँदा पनि र वरिपरि जतासुकै ढलान गर्दापनि काठमाडौंको जमिन रिसाएको छैन, रसाएकै छ। कस्तो गुणी उपत्यका! कति पानी खुवाउन सकेको! काठमाडौंको पानी आत्तिएको छ। आजकाल इनार अलि गहिरै खन्नुपर्छ। तर पनि २—३ महिनाबाहेक अरु महिना पानी दिएकै छ। प्रत्येक ३—४ आनाको टुक्रोबाट मोटर लगाउँदा पनि पानी आइरहेको छ। यो अचम्म हैन? इनारमा बाल्टिन लगाएर वा ट्युववेललाई हातैले थिचेर पानी तान्ने हो भने त काठमाडौंको जमिन कहिल्यै आत्तिने थिएन। पानी नभएको शहरमा घरलाई छतदेखि गेटसम्म सर्लक्कै नुहाइदिने चलन छ। त्यो पखालपुखुल पानी जमिनभित्र जाने चलन भए त्यो जमिन कस्तो खुशी हुन्थ्यो होला। पानीको जति हाहाकार भएपनि कम्पाउण्डभित्र ढलान नगर्ने र आकाशे पानी संकलन गर्ने थिती काठमाडौंमा बस्न सकेन। भूमिगत दहमाथि बसेकोले जति दुःख भएपनि जमिनले पानी खान दिन्छ र ढिलोचाँडो मेलम्ची आइहाल्छ भन्ने आत्मविश्वास बोकेरै काठमाडौंले फुर्मास गरिरह्यो। फुर्मास जारी छ। ढुंगेधारा र नदीहरुमाथिको अत्याचार जारी छ। यही मेसोमा टुप्लुक्क मेलम्ची आइपुगेको छ। हाम्रो घाँटी भिजाउनलाई। भृकुटीमण्डपभित्रको ‘समुद्घाटन ढुंगेधारा’मा पानी निरन्तर आउने र थापेर खान पाइने खबर छ। यो खबर आँत सुकेका ढुंगेधाराहरुले पनि सुने होलान्। पुरिएका ढुंगाधाराहरुले पनि सुने होलान्। ढुंगेधारा मात्र किन, सुन्धाराहरुले पनि सुने होलान्।
(नेपाल लाईभ डटकममा २०७८ साल चैत २२ गते आइतबार प्रकाशित )